Duqii Hore ee Muqdisho Oo Somaliland Ugu Baaqay In Ay Ka Laabato Gooni Isu Taageeda | Duul News International
Duqii Hore ee Muqdisho Oo Somaliland Ugu Baaqay In Ay Ka Laabato Gooni Isu Taageeda	(Duulnews)-Waxaan baaq u jeedinahayaa Madaxweynaha, xildhibaanada, salaadiinta, boqorada, ugaasyada iyo shacab weynaha Somaaliland in ay badbaado u noqdaan jiritaanka jinsiga Somaaliyeed oo ay iska iloobaan wax kasta oo ka soo gaarey taliskii ciidamada iyo xukuumadiisii. In ay ka tanaasulaan gooni isu taaga oo ay hogaan u noqdaan qaranka Somaaliyeed madaama dowladihii laga dhisi kooforta ay ku fashilmeen in ay keenaan wax horumar siyaasadeed, mid bulsho, mid dhaqaale iyo mid dib u heshiisiineed. Wadankii Somaaliyeed wuxuu ku sii socdaa meel aad u madow oo aan la garaneynin waxa uu ku dambeyn doono. Waxaan ogahay in dad badan oo
ka tirsan waqooyi iyo koofurba in ay hadalkaan dhibsandoonaan laakiin waa xaqiiqa aan laga aamusinkarin. Marka aad fiirisid sida ay wax ku socdaan, marka aad fiirisid gobolka Geeska Afrika waxa ka socda, Dhibaatada uu ku sugan yahay cunsurka Somaaliyeed meelkasta oo joogo. Dhibaatada haysata shacabka Somaaliyeed ee Yemen ku sugan, kuwa Kenya ku sugan, dagaalada joogtada ah ee Shabaab ay ku hayso shacabka Somaaliyeed iyo dhibaatada ay u geystaan kuwa gudaha jooga iyo kuw dibada joogaba.
Wadankii oo u sii kala googo’ahaya dowlado ku dhisan nidaamka qabaliga oo ayna jirin wax ka dhaxeeya iyo wax ay wadaagaan, taas oo cadoga Somaaliyeed uu aad uga faa’ideysanahayo.
Waxaa kale oon baaq u dirahayaa hogaamiyaasha Shabaab. Waxaan leeyahay in ka badan toban Sano ayaad dhiiga ummadaan Somaaliyeed oo muslimka ah ayaad daadineyseen wax natiijo ah ood ka gaarteena ma jirto. Kuwiini dhinteyna waxay ku dhinteen iyaga oo dhiig muslim qaba, kuwiina noolna waxaad ku nooshihiin cabsi iyo xasiloonidaro. Joojiya dhiiga aad ka daadineysiin Shacabkaan dhibaatadu dhan kasta uga timid, wada hadal gala hadii aad ummadaan wax u dan ah xambaarsantihiin, taasi waa inta ay talo gacantiina ku jirto berito waxaad arki doontaan ayada oo adnaan talo haynin.
warkan oo aanu ka soo xiganay Boga uu leeyahay Maxamed Nuur Tarsan
Daawo: Xisbiga Mucaaradka Aha Ee WADDANI Oo Dib-U-Dhigay Mudaharaad Ay Hore Ugu Baaqeen.